June 2019 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အမာရွတ်တွေကိုပိုဆိုးစေနိုင်သောနည်းများ ထိခိုက်ရှနာက လူတိုင်းလိုလိုဖြစ်တတ်ကြပါတယ် ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ ကြောင့် အလှပျက်နေသူတွေ ဗိုက်ခွဲဒဏ်ရာတွေ ပေါင်တွေ လက်မောင်းတွေက အမာရွတ်တွေကြောင့် အဝတ်အစား တိုတာတွေ မဝတ်ရဲဖြစ်နေသူတွေ များစွာရှိနေပါတယ် ဒါကြောင့် သင့်မှာဖြစ်နေ သော အမာရွတ်တွေ ကနေ ပုံမမှန် ရုပ်ဆိုးအမာရွတ်တွေမဖြစ်စေဖို့ ရှောင်ကြဉ်သင့်သောအမာရွတ်တွေ…
keloid အမာရွတ် နှင့် ပုံမမှန်ကြီးထွားအမာရွတ် အမာရွတ်ဆိုတာ နှင့် ရုပ်ဆိုးစေတတ်မှန်း လူတိုင်းသိကြပါတယ် ဒါပေမယ့် ပုံမှန်အမာရွတ်ထက် အဆများစွာ သင့်ကို ပုံဆိုးပန်းဆိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အမာရွတ်ပုံစံ နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ဒါတွေဟာ သင့်အလှကိုပျက်စေရုံသာမက မျက်နှာတို့ လက်တို့မှာဖြစ်ရင် လူကြားသူကြားထဲ ရှက်ရွံ့စိတ်ကိုတောင် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်…
မေမေတို့ရေ အရင်အပတ်က ကလေးများအတွက် ဆိတ်နို့ကုရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို ပြောပြပေးထားပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် ဘာကြောင့် သင့်တော်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို ပြောပြပေးထားတယ်နော်။ အာဟာရဓာတ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံရုံသာမက ပြီး ကောင်းကျိုးများပြီးတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အထူးထုတ်လုပ်ဖော်စပ်ထားတဲ့ ဆိတ်နို့မှုန့်ကတော့ DG3ဆိတ်နို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ DG…
???? အသားအရည်အတွက် ဗိုက်တာမင်စီ ရဲ့ ကောင်းကျိုးများ???? လူ့တန်ဖိုးနဲ့ အလှတရားကို အရေပြားတစ်ထောက်စာနဲ့ အကဲမဖြတ်သင့်ဘူးလို့ ဆိုကြတယ်။ အပေါ်ယံအရေပြားထက် အတွင်းစိတ်အလှတရားနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းကသာ အဓိကလို့လည်း ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း လူတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံးမြင်ရတာက အရေပြားဖြစ်သလို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးဆုံး…
?သံဓာတ်က ကလေးတွေအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ? ကလေးတွေမှာ ဘာလို့ သံဓာတ်ပိုလိုအပ်တာလဲ? သံဓာတ်ပြည့်ဝရင် Iron Man ကြီးဖြစ်သွားမှာမို့လား။ အဲ့လိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝလွန်စွမ်းအားရှင်ကြီး ဖြစ်မှာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ဘဝလမ်းခရီးကို ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းအပြည့်နဲ့ လျှောက်လှမ်းသွားနိုင်ဖို့တော့ သံဓာတ်အားနည်းနေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ကလေးတွေရဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်…